वि.सं. २०७६ भदौ ३१ गते मंगलबारको राशिफल, हेर्नुहोस कस्तो छ तपाइको आजको भाग्य ? -
September 17, 2019 अखवार अनलाइनLeaveaComment on वि.सं. २०७६ भदौ ३१ गते मंगलबारको राशिफल, हेर्नुहोस कस्तो छ तपाइको आजको भाग्य ?
गोपनियतालाई ध्यानमा राख्नुपर्ने समय रहेको छ । कार्यक्षेत्रका अड्चन हट्नसक्छ मन आँटिलो गर्नुस, विरोधीहरु विरोधीहरु पाखा लाग्नेछन्, उन्नती । व्यवसायिक उन्नती, लाभ–सन्तुष्टि मिल्ने, आरोग्यता र कान्ति बढ्नेछ, शत्रुपक्षमाथि विजय मिल्ने ।
मानसिक तनाव बढ्नेछ । दाम्पत्यजीवन तथा प्रेमसम्बन्धमा उचाडचडाब, चोटपटकको भय यात्रामा होसियारीको जरुरी । मनोविकारका बाबजुद श्रीवृद्धि, चोटपटक तथा स्नायु समस्या पर्न सक्नेछ । नयाँ योजना सुरु गर्नुभन्दा पहिले निकै सोंचविचार गर्नुपर्ने समय रहेको छ ।
मिथुन (क, कि, कु, घ, ङ, छ, के, को, ह)
केही अन्तरद्वन्द्वका बाबजुद दाम्पत्य–प्रेमसुख बढ्ने, व्यवसायमा प्रगति, भेटघाट, मनोरञ्जन । दाम्पत्य जीवनमा सुमधूरताको बाबजुद शङ्का–उपशङ्का, भौतिक सुखसुविधा र श्रीलक्ष्मी बढ्ने । अरुको सल्लाहमा हिंड्दा आर्थिक घाटा व्यहोर्नुपर्ने सम्भावना छ ।
प्रतिष्ठामा आंच आउन सक्छ । स्वास्थ्यको शिथिलताले कामकार्यमा अलमल, अपव्यय बढ्ने । कार्यमा अड्चन र अपजस, पारिवारिक मतभेद, आदिले नैराश्यता बढाउने । गलत संगतमा परिने सम्भावना रहनेछ । आफ्नो सकारात्मक सोंचले चुनौतीहरुको सामना गर्दै अगाडी बढिनेछ ।
सिंह (मा, मि, मू, मे, मो, टा, टि, टू, टे)
सामाजिक काममा सहभागी भइनेछ । सुधारोन्मुख समय छ, धार्मिक आस्था बढ्ने देखिन्छ भने गर्न खोजिएको कार्य अगाडि बढ्न सक्छ । औपचारिक कार्यक्रमहरूको संयोग देखिन्छ, हल्का कुराले पनि महत्व पाउने, इज्जत–प्रतिष्ठा बढ्ने । प्रेमसम्बन्ध तथा वैवाहिक सम्बन्ध सुमधुर रहनेछ ।
उत्तम समय छ, कार्य पूर्ण हुने, मानप्रतिष्ठाको विकास र वरिष्ठवर्गसँग सम्पर्क स्थापित हुनेछ । व्यवसायको राम्रो प्रचार–प्रसार हुने, प्रसिद्धि बढ्ने, पदप्रतिष्ठा तथा जिम्मेवारी वहन गर्न पर्नेछ । आफ्नो कारणले अरु कसैको मन दुख्ने सम्भावना रहेकोले सचेत रहनुपर्ने समय छ ।
आय–आम्दानीको पक्षमा प्रगति हुने देखिन्छ, व्यवसायले व्यस्तता पाउनेछ, कार्यमा रुचि बढ्नेछ । कार्यमा मनोवाञ्छितसफलता र यथेष्ठ आय–आम्दानी हुँदा मनमा प्रसन्नता, स्वजनको बृद्धि हुने । आवेगमा आएर निर्णय लिइने समय रहेकोले बोली व्यवहार तथा निर्णयमा संयमित रहनु उचित हुनेछ ।
वृश्चिक (तो, ना, नि, नु, ने, नो, या, यि, यू)
व्यवसायीहरुका लागि उत्तम दिन रहेको छ । नयाँ कार्यको थालनी, आफन्तहरुको सेवा, पेशागत वचस्व स्थापित हुने । खर्च, कार्यमा असफल, मानप्रतिष्ठामा ह्रास, दिग्दारी दिने समय छ । यात्रामा मालसामान चोरिने या हराउने सम्भावना रहेको छ । वैवाहिक सम्बन्धमा मतभेद उत्पन्न हुनेछ ।
अनावश्यक घुमफिर, गर्न खोजेको कार्यमा अबरोध, सञ्चित धनको खर्च, मानसिक उद्दिग्नता । दिनलाई सामान्य मान्न सकिन्छ, लगानीको चाहना, योजना माथिको विचारविमर्श अधुरो रहला । कुनै सभा समारोहमा सहभागी हुने सम्भावना रहेको छ । प्रेमसम्बन्ध राम्रो रहनेछ ।
मकर (भो, जा, जी, जू, जे, जो, ख, खि, खु, खे, खो, गा, गी)
समर्थकहरुको कमि नहोला, पारिवारिक सौहार्दता, मिठो भोजन । व्यवहारिकतामा कुशलता, पेशाको मान्यता–सम्मान मिल्ने । घरेलु सामानबाट दुर्घटना हुन सक्ने सम्भावना रहेकोले सजग रहनु उचित हुनेछ ।
स्वास्थ्यमा समस्या देखिनेछ । मिलाएर प्रस्तुत हुँदापनि धनसञ्चयमा प्रगति हुन गा¥हो, राम्रो बोल्न खोज्दा पनि नराम्रो पर्न सक्छ । अपेक्षा अपूर्ण रहनसक्ने, सञ्चित धनको अपव्यय हुने खतरा छ । प्रेमसम्बन्धमा बाधा उत्पन्न हुनेछ । लामो यात्रा नगर्नु आजको लागि उत्तम हुनेछ ।
पौरख गर्न तथा व्यवसायबाट राम्रो आर्जन गर्नसकिने, दाजुभाइबाट सहयोग र साहस मिल्ने । हिम्मत बढेको छ, अधुरा कार्य पूरा गर्न सकिने, इष्टमित्र तथा दाजुभाइबाट आधार मिल्ने देखिन्छ । बोलीमा नियन्त्रण गर्नु राम्रो रहनेछ ।
चलचित्र सम्बन्धी अध्ययनका लागि ‘नेपाल फिल्म क्याम्पस’ सञ्चालनमा
बुधबार राती काठमाडौमा भूकम्पको कडा झडका
स्वास्थ्य सामग्री अनियमितता प्रकरण : अख्तियारले थाल्यो छानविन
शुक्रबारसम्म असिना पानी पर्न सक्ने, सर्तक रहन विभागको आग्रह
April 17, 2019 April 18, 2019 अखवार अनलाइन